“Mety hoe tsy jadona i Brezila, fa tsy mandala ny demaokrasia koa anefa”, hoy ny mpanora-gazety breziliana iray · Global Voices teny Malagasy
Nanoratra boky momba ny taona 2018, nanova tanteraka an'i Brezila, i Mário Magalhães
Mpanoratra Fernanda Canofre Nandika (es) i Marta Capua, Annick Battesti, Miranah
Voadika ny 04 Desambra 2019 5:38 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Shqip, русский, Français, Português, English
Ny mpanora-gazety sady mpanoratra Mário Magalhães. Saripika: Daniel Ramalho, nahazoana alalana avy aminy.
Ny alin'ny 14 marsa 2018, daty namonoana ilay vehivavy politisiana elatra havia Marielle Franco sy ny saoferany Anderson Gomes [mg] tao Rio de Janeiro, nahatsapa ny mpanora-gazety Mário Magalhães fa tokony hanoratra boky vaovao izy. Fito volana alohan'ny fifidianana filoham-pirenena, efa fantany sahady fa ho taona manan-tantara ho an'i Brezila ny taona 2018.
Mpanora-gazety avy ao Rio de Janeiro i Magalhães ary niasa tamin'ireo gazety breziliana lehibe toy ny O Globo[fr], O Estado de São Paulo [fr] ary ny la Folha de São Paulo [fr]. Angon'ireo andram-panoratana niaingana tamin'ny voalohany ho amin'ny endrika breziliana amin'ny The Intercept sy ahitana lahatsoratra vaovao vitsivitsy ny bokiny vaovao, “Any ankoatran'ireo ady sy ranomaso : biôgrafian'ny taona 2018″.
Trangan-javatra telo nampihozongozona an'i Brezila tamin'ny taona 2018 no nifantohan'ireo andram-panoratana: ny famonoana an'i Marielle Franco [mg] sy Anderson Gomes tamin'ny 14 marsa, ny fisamborana ny filoha teo aloha Luiz Inácio da Silva (Lula) tamin'ny 7 avrily, ary ny nifidianana an'i Jair Bolsonaro ho filoha tamin'ny 28 oktobra. Nampiasainy ireo tranga ireo ho toy ny lopy ijerena ny lasan'i Brezila feno tsirefesimandidy ary mbola mandindona azy amin'izao fotoana.
Mpanoratra ihany koa i Magalhães toy ny biôgrafian’ i Carlos Marighella [fr], mpanorina ny vondrona mitam-piadiana komonista Hetsika Fanafaham-Pirenena [fr] tamin'ny taona 1968, iray amin'ireo vondrona niroso tamin'ny tolona mitam-piadiana nanohitra ny jadona miaramila notohanan'i Etazonia (1964-1985) tao Brezila. Indroa nahemotra tamin'ity 2019 ity tao Brezila ny famoahana ny filma iray, nalaina avy amin'ny boky, izay niantsehatra izany ilay mpihira Seu Jorge [fr] ary nanatontosa izany ilay mpiantsehatra Wagner Moura [fr], izay nandray ny anjara toerana voalohany tao amin'ny andian-tsarimihetsika “Narcos” hita ao amin'ny Netflix, noho ny fahasahiranana ara-taratasy tokony navoakan'ny mpandrindra ny sinema – ka nahatonga ny ahiahy fa misy sivana ao ambadika ao.
Tamin'ny septambra ny Global Voices nifampiresaka tamin'i Magalhães momba ity bokiny vaovao ity, nivoaka tao Brezila irery ihany, ary tamin'ny taona voalohany fehim-potoam-piasan'i Bolsonaro. Somary nafintina kely ny antsafa eto ambany.
Global Voices : Tao amin'ny boky, nataonao mirazotra ny famonoana an'i Marielle Franco sy an'i Edson Luís, mpianatra matin'ny polisin'i Rio de Janeiro tamin'ny taona 1968. Manandanja tahaka ny an'i Edson tokoa ve ny fahafatesan'i Marielle ?
Mario Magalhães: Nosoratana vao mafana avokoa ny ao anatin'ny boky iray manontolo [ao amin'ny tsanganan'i The Intercept Brasil sy ireo hafa mbola tsy nivoaka], ankoatra ny sasiteny, izay nosoratako tamin'ny taona 2019, nanakatona hatreo ny taona izay vao nifarana. Tena nahatalanjona ahy ny nanoratako tanelanelan'ny volana febroary sy marsa, ka nitenenako tamin'ny tenako hoe herinandro vitsivitsy monja dia 50 taona izay no namonoana an'i Edson Luís (tamin'ny 28 marsa). Nofaranako ny lahatsoratra tamin'ny fanononana ny tahan'ny trangan-kerisetra tao Brezila, indrindra ny famonoana ny tanora mainty, izay toa tsy nahataitra loatra. Tany amin'ny faran'ny toko aho no nanontany : Hanao ahoana ny fihetseham-po eto Brezila amin'izao fotoana raha misy zavatra tahaka izao mitranga ?
Ary indrisy fa nitranga izany. Tapabolana taorian'izany no nisy namono i Marielle sy i Anderson Gomes, saoferany. Tsy niteraka fihetseham-po nandrasan'ireo mpikatroka mpandala ny mahaolombelona izany, fa nahavalalanina ny [fihetsiketsehana] tamin'ny 15 marsa; indrindra tao Rio, tananandry zareo, tao amin'ny tanàna nahafaty an'i Edson, sy niteraka ny fihetseketsehan'ny mpianatra goavana hanoherana ny didijadona tamin'ny taona 1968. Lasa saimbôlin'ny zava-nitranga tamin'izany fotoana izany ny fahafatesan'i Marielle. Nanohina ny tsi-fihetsehana ny fahafatesany, nampidina an-dalambe ireo olona tsy dia mivoaka ny tranony. Izy no antso hanoherana ny fahanginana. Izy no zava-nitranga fototry ny taona.
GV: Ao amin'ny firenena fohy fitadidy ara-tantara, inona no eritreretinao amin'ny tsingerin'ny lasa mitamberina io ?
MM : Lozoky (tonelin’) ny vanim-potoana maro ny boky, satria nampivangongo ho amin'ny toerana iray ireo fotoana manatantara maro ny taona 2018. Ny tetikasa nandresy dia ny an'ny “viúvas da ditadura” [mpitondratenan'ny didijadona : vondrona miaro sy mitaky ao anaty hanina ny fiverenan'ny didijadona]. Tamin'io fotoana io no nahazo vahana teto Brezila ny hevitra fasista sy nazi. Misy karazana izay noheverin'ny mpanaraka tantara ho efa fongana hatry ny ela, ny integralista amin'ny hetsika maherisetra [fr] – ny integralisma no endrika breziliana amin'ny fasisma nazi mandrapanaovana azy ho tsy ara-dalàna tamin'ny taona 1938. Tamin'ny taona 2018, nisy integralista nanafika ny oniversite federalin'i Rio, nangalatra ny sorabaventy antifasista ary nandoro ireny tamin'ny fomba mampahatsiahy ny litorjian'ny Ku Klux Clan.
Tamin'io taona io, [nampiova] indray ny fifidianana breziliana ny lainga, ary niverina indray tany amin'ireo taona 1920 ny boky, raha nanaovana taratasy hosoka lazaina fa nosoratany ny kandidà Artur Bernardes; avy eo tany amin'ny taompolo 1940 raha nampangaina tsy ara-drariny ho niantso ny breziliana mahantra indrindra ho “marmiteiros (maromita)” ny kandidà brigadier Eduardo Gomes; niverenana ny tany amin'ny taona 1989, raha nanaparitaka siosiondresaka ry zareo fa raha resin'i Lula i Collor amin'ny fihodinana faharoa i Collor dia tsy maintsy manokana efitrano ao aminy ny fianakaviana saranga antonony tsirairay ho an'ireo fianakaviana tsy manan-tany. Fa tsy misy ny azo nampitahaina tamin'ny lainga amin'ny “kit gay” sy ny fiantraikany nandravarava – nandrafitra indray ny fiandohan'izany tsaho izany aho, izay nanomboka tanelanelan'ny taona 2010 sy 2011. Noforomporonin'i Bolsonaro ny “kit gay”, ary nino azy ny 84 %-n'ny mpifidy azy fa hametraka ny “kit gay” any an-tsekoly i Fernando Haddad [fr] [mpifanandrina amin'i Bolsonaro tamin'ny fifidianana taona 2018] (minisitry ny fanabeazana telo aloha, tompon'andraikitry ny fitaovana pedagojika momba ny fimaroana sy fanondroana lahy/vavy any an-tsekoly). Izany no antony iheverako fa maro ireo singa manazava ny fandresen'i Bolsonaro, fa tsy misy amin'ireo manana ny lanjany noho ny fanintsanana an'i Lula amin'ny hazakazaka ho filoham-pirenena.
Farany volana aogoditra , fitsapan-kevitra nataon'ny [ivontoeram-pikarohana] Datafolha nametraka isa roapolo ambony ho an'i Lula miohatra an'i Bolsonaro, mampiseho fa mbola mitarika izy amin'ny fitsapan-kevitra rehetra na dia mbola any am-ponja aza, ary nanambintana izy ny handresy tamin'ny fifidianana dieny fihodinana voalohany. Tsy hahomby ny hamorona hoe hizara lohantsentsefina amin'ny endrika filahiana any amin'ny akaninjaza i Lula, izay efa nitondra ny firenena nandritra ny valo taona. Fa hafa kosa ny toe-javatra amin'i Haddad, tsy fantatry ny olona ampolony tapitrisa izy.
GV : Nolazainao tao amin'ny boky fa tsy isalasalana ny nanaovan'ny Antokon'ny Mpiasa (PT) zavatra voararàn'ny lalàna nandritra ny 13 taona nahateo amin'ny fitondrana azy. Ahoana ny hanazavanao ny laza tsy mety lefy an'i Lula ?
MM : Hery mampisara-bazana eo amin'ny politika breziliana ny “anti-lulisme”, fa mandritra izany fotoana izany ihany, lohalaharana i Lula tamin'ny fitsapan-kevitra ary nanambintana ny ho voafidy ho filoha indray tamin'ny taona 2018. Nilaza fotoana sasantsasany ny boky fa “nidi-kizo” ny PT, raha ampiasaina ny fomba fitenin'ny senatera taloha Jaques Wagner, manondro ny Antokon'ny Mpiasa. Fa mbola mihoatra noho izany, voarohirohy tamin'ireo trangan-kolikoly efa nisy an-taonany maro ny PT, ary mbola naveriny izany amin'ny tranga sasany, nefa tsy afa-nisaraka tamin'ny fandrosoana hitamaso niainan'i Brezila tamin'ny fehim-potoam-piasany ny famirapiratan'i Lula. Sambany teo amin'ny tantaran-dry zareo no tafala tamin'ny vahohon'ny fahantrana farahidiny ny Breziliana 30 tapitrisa, noho ireo fandresena ara-tsosialy.
Raha afa-nirotsaka i Lula, dia ho voadify ho filohan'ny Repoblika. Mamerina mitantara indray ireo tetika tsy ara-dalàna sy tsimifaditrovana nampiasaina tamin'ny ‘bemidina Lava Jato [fr] ny boky sy ny fotoam-pitsarana momba ilay trano triplex nahatonga azy ho tafala tamin'ny hazakazaka ho filoha. Mihevitra aho fa afa-miteny, amin'ny fijereko ny zavamisy, fa tsy nahazo fitsarana tsy mitongilana i Lula. Tamin'ny janoary 2018, tao amin'ny fitsarana ambony, tsy vitan'ny hoe nihazona ny didy ny Tribonalim-paritra federaly, fa mbola nampiany indray ny didy fanagadrana (9 lasa 12 taona). Nilaza ny iray amin'ireo mpitsara telo : “Raha notsaraina izy dia nanao zavatra izany”. Izay midika hoe, tsy nisy na aiza na aiza teto ambonin'ny tany, na oviana na oviana teo amin'ny tantara, voampanga ho lasa tsy manantsiny, satria voampanga izy, dia meloka izany. Tsy vitan'ny hoe lojika manafintohina izany, fa fanitsakitsahana ihany koa ny Lalampanorenana miantoka ny maha-tsi-manantsiny aloha voalohany.
GV: Lohahevitra hita hatrany ao amin'ny bokinao ny gazety. Amin'ny maha-mpanora-gazety anao, ahoana ny eritreritrao amin'ny fomba iresahan'ny fampitam-baovao an'i Bolsonaro ?
MM : Manerana izao tontolo izao dia heverina ho kandidàn'ny farany havanana i Bolsonaro. Niteny tao amin'ny bokiko aho fa raràna ny mpanora-gazety tsy hanoratra izany amin'ireo gazety sasany eto Brezila. Mihevitra aho fa zavadehibe ny manoritra izao zavatra manaraka izao : tsy misy governemanta, tsy misy fitondram-panjakana teo amin'ny tantara ka tia ny fanoratan-gazety (tsy tiany koa ny mpanora-gazety) raha ampiharina amin'ny fomba mahaleotena izany, ao anatin'ny fisainana mandala ny mahaolompirenena, hanara-maso ireo eo amin'ny fitondrana. Tsy misy fahefana amin'ny ankavia, ankavanana, afovoany na mankaiza na mankaiza ka ho tia izany.
Na izany aza dia mivoaka ny taompolo maromaro nizakàn'ny eo amin'ny fitondrana ny asam-panoratan-gazety isika. Ary nanambara taminay i Bolsonaro tamin'ny taona 2018 fa tapitra hatreo izany [fizakàna izany]. Ny toko mitondra ny lohateny hoe “Ny gazety voatsindry” no miresaka ireo fampitam-baovao tahaka ny manaiky hotsindrian'i Bolsonaro. Rehefa maneho tahotra ny gazety, dia tsy mampihatra intsony ny anjara toerany manantantara. Tsy ilaina ny mandoka azy : tsy tia mpanora-gazety i Bolsonaro ary mitaky bebe kokoa hatrany izy. Mety hamoaka lahatsoratra mandokandoka ny gazety iray, fa tsy misy manaka azy, ora roa aty aoriana, handrara ilay mpanora-gazety voalaza tsy hanatrika ny valandresaka – tahaka izay efa nitranga rahateo. Bolsonaro no loza mitatao lehibe indrindra ho an'ny fanoratan-gazety breziliana hatramin'ny niafaran'ny didijadona.
GV: Nanoratra ianao tao amin'ny bokinao fa ho fahavoazana lehibe amin'ny demaokrasia breziliana ny fandresen'i Bolsonaro, taorian'ny taona 1968 izay nandraisan'ny jadona miaramila ny Atrika fanorenana laharana faha-5 [fr] [izay mametra aoka izany ny fahafahana sivily]. Inona no ananantsika eto Brezila amin'izao fotoana?
MM : Androany ny sivilizasiona mifanandrina amin'ny olon-doza [barbarie]. Tsy didijadona i Brezila 2019 saingy tsy demaokrasia ihany koa. Mizotra mankany amin'ny fitondram-panjakana nahita masoandro tamin'ny 1964 ny tetikasan'i Bolsonaro, araka izay efa nomarihako tao amin'ny boky. Hanome ohatra iray azo raisina aho, na tsaratsara kokoa noho izany, ohatra ara-tantara. Tamin'ny novambra 1935, nisy ny fitroarana komonista [fr], (izay nantsoin-dry zareo hoe revolisiona), niadiana tamin'ny governemanta tsirefesimandidy, saingy ara-dalampanorenana an'i Getúlio Vargas [fr], izay nilaza izany ho fanonganam-panjakana ary namelona ny fanenjehana ara-politika faobe. Olona an'arivony no nampidirina am-ponja, nisy ny fampijaliana, maty ary fanenjehana. Tamin'ny taona 1936, tsy didijadona amin'ny fomba ofisialy ny governemantan'i Getúlio, saingy nametraka rivo-politika nanempotra ny fahafahana izy. Nanangana tribonaly manokana azy, Tribonalin'ny fiarovam-pirenena. Niorina tamin'ny taona 1937 ny didijadona, rehefa nanomana fanonganam-panjakana i Getúlio, nanakatona ny Kongresy ary nandrava ny rafi-panjakana.
Tsy fantatro izay hitranga amin'ny hoavin'i Brezila, saingy fantatro fa tsy ho ao ny demaokrasia. Ao amin'ny demaokrasia, voafidy araka ny sitrapo iaindrianan'ny vahoaka izay mitondra. Tamin'ny taona 2018, ny sitrapon'ny vahoaka dia ny hifidy an'i Lula, ka na mitombina na tsia ny fanapahankevitra, tsy afa-naneho ny heviny izany sitrapo [faniriana] izany noho ny fanapahan-kevitra ara-pitsarana tsy nahazoan'ny voampanga, Lula, nahazo fitsarana tsy mitongilana. Izany no antony mahatonga ny rafitra tantanin'ny filoha tahaka ny an'i Brezila, tsy izay nofidian'ny mpifidy no mitondra amin'izao fotoana. Amin'ny teny hafa, tsy nohajaina ny fiandrianan'ny sitrapon'ny vahoaka. Governemanta tsy ara-drariny io noho izany.
GV: Nahazo vato 57 tapitrisa i Bolsonaro tamin'ny fihodinana faharoa taona 2018. Ahoana moa izany hoe firenena iray handeha hifidy an'i Lula, araka ny fitsapan-kevitra, no lasa mifidy kandidà iray izay mifanohi-kevitra aminy tanteraka ?
MM : Nanararaotra ny tsi-fahafaliam-bahoaka vokatry ny lalana nandehanan'ny firenena i Bolsonaro. Ho an'ny ankamaroan'ny olona ao amin'ny fiarahamonina, indrindra ireo ankohonana izay mahatratra indroa ka hatramin'ny indimy avo heny noho ny karama ambany indrindra ny fidiram-bola, niala avy any amin'i Lula nankany amin'ny Bolsonaro ny kinasam-pifidianana. Tsy azo isalasalana fa tao amin'ny fanjakana Rio de Janeiro no tena goavana izany toe-javatra izany. Tokony ho vatom-panoherana ny vato ho azon'i Lula. Rehefa tsy eo izy dia i Bolsonaro indray no naka ny toeran'ny outsider amin'ny fanoherana, nefa izy tsy izany. Na dia ny filoha teo aloha Michel Temer aza nanambara fa nandrotsa-bato ho an'i Bolsonaro. Misy koa ireo singa hafa nandray anjara tamin'ny fampandresena an'i Bolsonaro : tratran'ny krizy ny filaminam-bahoaka (ary tsy mbola nisy toy izany ny tahan'ny famonoana olona), rovidrovitra ny toekarena (niakatra ny tahan'ny tsi-fananana asa), leo politisiana mahazatra, olana eo amin'ny maoraly sy ny fomba. Nampisy fiovana tamin'ny vokatra ny firohotana “antipétiste, fa ho nandesy tamin'ny fifidianana i Lula, anarana ankatoavina indrindra ao amin'ny antoko. Matanjaka noho ny antokony i Lula eo amin'ny jerim-pifidianana.
GV: Nanoratra boky ny mpanora-gazety breziliana Zuenir Ventura nampitondrainy ny lohateny hoe : “1968: taona tsy vita”. Vita ve ny taona 2018, sa mbola eo isika izao ?
MM: Mbola hitohy mandritra ny ampolony taona maro ny taona 2018. Niverina tao anatin'ny fahantrana lalina indray ny Breziliana an-tapitrisany maro tamin'ny taona 2018, ary mbola mitohy izany. Nilaza ny governemanta voafidy tamin'ny taona 2018 fa mbola misy ireo toerana azo hanapahana azo ao Amazonia, nihantsy ady tamin'ny siansa izy tamin'ny fampihenana ny tetibola tamin'ny sehatry ny siansa sy ny fanabeazana. Nanambara tetikasa mamono ny fahafahana ho an'ny kolontsaina breziliana ireo mpandresy tamin'ny fifidianana ary manomboka manangana izay antsoin-dry zareo hoe faritra fanivanana, izay efa mazava loatra amin'ny teny malagasy fa sivana.
Hiantraika antaonany maro amin'i Brezila ny vokatry ny taona 2018, ary mety ho tsy tafaverina intsony amin'ny tranga sasany. Mety ho azo ambolena indray izay may ao amin'ny ala amazoniana amin'izao fotoana, fa tsy ho toy ny taloha intsony ny ala. Hisy taranaka iray manontolo ho tratran'ny fahantrana ary hihena ny fahafaha-mahatakatra ny fampianarana ambony. Efa maro ireo siantifika efa mandao ny firenena satria tsy manana fomba intsony ireo hampandrosoana ny taranja sy ny fikarohana ataony eto Brezila.
Nandika (es) i Marta Capua